कतिपय साथीहरुले ब्लगिङको सहि उपयोग नै थाहा पाउनुभएको छैन-निशांक रानाभाट - MeroReport
कतिपय साथीहरुले ब्लगिङको सहि उपयोग नै थाहा पाउनुभएको छैन-निशांक रानाभाट
नाम निशांक रानाभाट, पहिले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशिएको तर अहिले नेपालमै कुनै पेशामा स्थापित हुन प्रयासरत युवा । सायद यो परिचय विइङ एनआरबिका निम्ति प्रयाप्त चिनारी नहुन सक्छ । ब्लग र ट्विटरमा विइङ एनआरबि नामले परिचित कास्की जिल्लाको लेखनाथ नगरपालिका वडानम्बर ५ निवासी निशांक रानाभाट सक्रिय ब्लगर समेत हुन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ 'साताका ब्लगर'मा यसपटक हामीले उनै निशांक अर्थात विइङ एनआरबिसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी:
सुरुवात तपाँइको नामबाटै गरौँ, यो विइङ एनआरबि भनेको चाँही के नि? यहाँको ब्लग र ट्विटरमा यो नाम रहेछ ।
यो आफ्नै नामको इनिसियल राखेको हूँ आफ्नो ब्लग र ट्वीटर ह्यान्डलमा।
अहिलेलाइ सोसल मिडियामा म आफुलाई सर्वसाधारणकै रुपमा चिनाँउन चाहन्छु, आँफैलाई ब्लगरका रुपमा चिनाउनका लागी मेरो ब्लग त्यति व्यवस्थित छैन।
तपाँइको ब्लग यही एउटा मात्रै कि अरु पनि छन?
मेरो ब्लग यहि मात्र हो। तर मैले केहि राम्रो लेखें कि जस्तो लाग्यो भने म आकार अनिलको आकारपोस्टमा पोस्ट गर्दछु। मेरा लेख पढ्न मन भएमा मेरो ब्लगमा भन्दा यस लिंकमा गएर हेर्न अनुरोध गर्दछु।
तपाँइको ब्लगमा नेपाली अँग्रेजी दुबै भाषामा लेखिएका ब्लगपोष्टहरु रहेछन् । खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो भाषा तथा लेख्ने बिषयबस्तु दुबैका बारेमा भन्नुपर्दा?
म स्पष्टवक्ता हुँ। अनि स्पष्ट भन्नुपर्दा लेखनको कुरामा म अत्यन्त मुडी र अल्छी व्यक्ति हुँ । मेरो आफ्नो ब्लगमा बिरलै ब्लगपोष्ट हुने गर्छन। मेरा ब्लगमा भएका कतिपय अंग्रेजी र नेपाली पोष्टहरु अरु साईट/ब्लगबाट साभार गरिएका छन्। म कहिले काहिँ राम्रा कथा कबिता लेख्ने इच्छा राख्छु, लेख्न बस्छु, सोचेको जस्तो हुँदैन। त्यसैले मेरा लेखहरु ड्राफ्टमा धेरै थन्किन्छन, ब्लगपोष्ट कम हुन्छन। केहि मात्रामा चाहिँ पोस्ट गरेको छु।
मलाइ बास्तबमा आफ्नै एउटा साइट खोल्ने रहर लागेको थियो, के जानिन, के मिलेन अनि यहि Wordpress मा रहरै रहरमा एकाउन्ट खोलें। कहिले देखि ब्लगिङ् शुरु गरें त्यो याद भएन तर पहिलो पोष्ट हेर्दा २०११ को जनवरी तिर खोलेको रहेछु जस्तो लाग्छ।
म मुड अनुसार ब्लगिङ गर्ने गर्दछु। यसले मलाइ आत्मसन्तुष्टि दिन्छ।
म खासै एउटा निश्चित बिषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ लेख्न सक्दिन। प्राय: अनुभूति लेख्ने कोशिस गर्छु, र कहिलेकाहीँ कविता पनि।
ब्लगिङ् गर्न रहर धेरैलाइ हुन्छ, अनि समय मिलाउने हो भने निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो पनि छैन, तर थोरै जसो हामी व्यस्त छौँ, धेरैजसो हामी अल्छी छौँ। ममा पनि यो कुरा लागु हुन्छ।
भ्रमण गर्ने, संगीत सुन्ने साथै केहि नौला विचारधारा भएका पुस्तकहरु पढ्ने रुचि राख्छु।
तपाँइ अरु सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
मेरो घरनेर 'गल्ली' भन्ने चोक छ, त्यहाँ बिहान देखि बेलुकासम्म बुढापाकाहरु राजनीतिका फुस्रा गफ लगाऊँदै बस्छन। सिर्जनशिल कामका बारेमा उनीहरु त्यति रुचि राख्दैनन। आजकाल सोसल मिडिया मलाइ त्यहि 'गल्ली' जस्तैजस्तै भान हुन थालेको छ, फेसबुकको त कुरै नगरौं, ट्वीटर पनि आजकल केवल राजनीतिक गफ गर्ने र आक्रोश पोख्ने थलो भएको छ।
केही साथीहरुले सदुपयोग पनि गरि राख्नुभएको छ, केही साथीहरुले दुरुपयोग गरि रहनुभएको पनि छ। कतिपय साथीहरुले ब्लगिङ्को सहि उपयोग नै थाहा पाउनुभएको छैन।
पढ्छु, आकारपोष्ट मेरो आफ्नै ब्लग जस्तो हो। अरु साथीहरुको ब्लग पनि नियमित रुपमा पढ्ने गर्छु, मलाइ ब्लगका नाम त खासै याद हुँदैनन तर सन्जीव सरको ब्लग, जनकको ब्लग, म्याड्स एरिया सरको ब्लग, बाबाजी, बरुण कम्पनीको र अन्य साथीहरुको ब्लग पढ्ने गर्छु। विशेषगरी ट्वीटरमा कुनै ब्लगपोष्टको चर्चा हुँदैछ भने त्यो छुटाउन चाहँदिन। नत्र त सोसाइटी मै नपरिने डर हुन्छ। :)
बिषय जुनसुकै भए पनि प्रष्ट अनि इमान्दार बिचार राखिएका ब्लग्पोष्ट मेरा रोजाइमा पर्छन। प्राय: कथा या अनुभूति पढ्न मन लाग्छ।
आचारसंहिता हरेक कुरामा लागु भएको राम्रो। तर मै लगायत धेरैजसो ब्लगरहरुलाइ यस बिषयमा जानकारी छैन जस्तो लाग्छ।
थाहै नभएपछि पालना हुने कुरा पनि आऊँदैन। तर अरुका ब्लग हेर्दा खासै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पनि पाएको छैन।
एकपटक जापानमा भुकम्प जाँदा रेडियम लिक भएको कुराले ठुलो चर्चा पाएको थियो। त्यो बेला मैले आकारपोष्टबाट होकि कुनै अर्को ब्लगबाट सोहि बिषयको एउटा लेख कपी गरेर ब्लग पोष्ट गरेको थिएँ। त्यो ब्लग पोष्टले मेरो ब्लगमा एकैदिनमा सबैभन्दा धेरै हिट पायो। पहिले त निकै खुसी लाग्यो तर पछि आँफैलाई लाज लागेर आयो अनि तुरुन्तै त्यो पोष्ट डिलिट गरिदिएँ।
ब्लग आफ्ना कुरा आफैलाई मन पर्ने गरेर लेख्ने, ट्वीटर आफ्ना कुरा अरुलाई पनि मन पर्ने गरेर लेख्ने थलो जस्तो लाग्छ मलाइ। फेसबुकको त कुरै नगरौं, चारधाम नै भएको छ, फोटोमा लाइक बटुल्ने थलोमा लेख सिर्जनाका कुरा खासै हुँदैनन्।
लेखिएका छन्, मैले अघि नै उल्लेख गरें कि मलाइ ब्लगका नाम खासै याद हुँदैन, तर मैले पढ्ने धेरैजस्तो साथीहरुको ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएको पाएको छु।
ब्लगिङ् बैकल्पिक मिडिया नै हो। पहिले कुनै पत्रिकामा कुनै लेख लेखेर पठायो, पोस्ट हुने हो कि नहुने हो, हुने हो त कहिले हो केहि निश्चित हुदैनथ्यो, आजकल हेर्नुस त ! लेख्यो अनि ब्लग पोष्ट गरिदियो । रुचि राख्नेले पढिहाल्छन। काठमाडौँमा धेरै ब्लगर भएर काठमाडौँ केन्द्रित भएको जस्तो लागेको होला तर मोफसलमा पनि उतिकै ब्लगरहरु छन्, मेरा कैयौँ साथीहरु ब्लगिङ् गर्छन तर केवल आफ्नै लागि मात्र लेख्ने गर्छन, बाहिर उति देखाउन चाहन्नन्।
हो, तर यसको सहि उपयोग हुन सकेको छैन।
मेरो रिपोर्टलाइ म पुन: आभार प्रकट गर्दछु। हरेक हप्ता फरकफरक साताका ब्लगरहरु देख्दा मलाइ पनि खुबै रहर लाग्दथ्यो। आज स्वयं अन्तर्वार्ता दिँदा हर्षित छु। अघिल्ला साथीहरु जसरी तार्किक कुरा राख्न म अलि जान्दिन तर मलाइ भन्न मन लागेको एउटा कुरा के छ भने नयाँ ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहित गरिनु जरुरी छ। सबैले राम्रा लेख्छन भन्ने हुँदैन । प्रयास गरेका हुनाले उनीहरुका कमी कमजोरीहरुलाइ औंल्याइदिनुपर्छ । म यहाँ यस्ता दिलदार व्यक्तिहरुको कमी देख्छु, अनि व्यक्तिबिशेष मन पर्दैमा जस्तो लेखलाइ पनि राम्रो छ भनेर झुटा तारिफ गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो अन्त्य हुनुपर्छ।
Comment by Pagal Basti on July 24, 2013 at 3:59pm
मेरा तर्फबाट पनि बधाइ है नेपाल राष्ट्र बैंक सरलाई
Comment by Krishna Guragain on July 15, 2013 at 5:54pm